13 Responses to “အလုပ်များသူ”
မချောရေ ပထမဆုံးလာဖတ်သွားတယ်နော်။ ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံတယ်။
ကျနော့်ကိုလည်း လောကကြီးက အလုပ်ပေးတယ်။ ကျနော် ပထမနေ့ ပုဆိန်သွေးတယ်။ ဒုတိယနေ့ ပုဆိန်သွေးတယ်။ တတိယနေ့ ...............
ကျနော် ခုထိ ပုဆိန်သွေးလို့ကို မပြီးသေးဘူး။
ကျနော်လည်း ပုဆိန် မသွေးဖြစ်တာ ကြာပေါ့.။
Very good idea post ...
u also take care ur health naw .... Don't write short stories till midnight.
Yes, I agree with u. We have to sharp our axe. Thanks for ur reminding us.
တတ်နိုင်သမျှ လူမှု၊စီးပွါး၊ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာများကို ရတဲ့နေရာကနေ ရသလောက် ယူတတ်ရင်း
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်များစွာကို အကျိုးရှိရှိ သုံးနိုင်အောင်..သုံးတတ်အောင် ..ညွှန်ပြထားတဲ့
ပေါက်ဆိန်သွေးရဦးမယ်။ သိပ်မထက်တော့သလို ဖြစ်နေလို့။
ပုဆိန်သွေးဖို့ သတိပေးတဲ့စာစုလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်.. အလုပ်များလွန်းတဲ့ အခါ တကယ်ကို မေ့လျော့နေမိပါတယ်.. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပုဆိန်သွေးဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်...
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ရုတ်တရက် ငါလည်း မသွေးတာကြာပါရော့လားလို့ သတိရသွားတယ်။
ဘာကိုဘယ်လို ရေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
မမရေ...ညီမလေးကတော့ ပုဆိန်သွေးဖို့ကို လိုအပ်နေပါတယ် ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ခုထိမသွေးဖြစ်သေးတာ...သိရက်နဲ့ မလိုက်နာတာ ပိုမိုက်တာပေါ့နော် :(
မမရယ် မှန်လိုက်တာ မောင်လေးကြုံဖူးတယ် စာပြီးစာလုပ်နေတော့ မ၇ဘူး
အရာအားလုံး သဟဇာတဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်တတ်မှ၇တယ်ဆိုတာ
အမရေးတဲ့ ပိုစ့် လေးက သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါ့မယ်-------------
မချောရေ .... လာလည်တယ်နော်၊ မော်မော်လည်း ဓားသွေးလိုက်ပါအုံးမယ်။ ဖတ်စရာတွေ အများကြီးရှိလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်.....